Iqela lethu - iAfrikaArXiv
Amalungu eqela le-KiaArXiv ziingcali ezineemvelaphi ezahlukeneyo kunye nobuchule kwiinkalo ezahlukeneyo ezifanelekileyo kwimfundo ePhakamileyo noPhando e-Afrika.
Ngaba ungathanda ukujoyina iqela le-EAArXiv? Qhagamshelana nathi kwaye usazise indlela onokuba negalelo ngayo.
Ngemibuzo ngokubanzi nceda uthumele i-imeyile info@africarxiv.org.
IYunivesithi yaseKenya [I-ORCiD]
Injineli yesoftware kunye nomphengululi kubuchwephesha bobuchwephesha obulandelayo kubandakanya ukuxutywa okubonakalayo kunye nokungqinisisa okungqinisiweyo, iiplatchain ze-blockchain, kunye namava omgangatho womoya ophantsi.
IYunivesithi yaseIbadan, eNigeria, [I-ORCiD]
IYunivesithi yaseKhartoum, eSudan [I-ORCiD]
Umfundi kwezamayeza, umphandi, usomashishini kunye negqwetha lokuvuleleka kuphando, idatha, kunye nemfundo. Ndinomdla ekwakheni inkcubeko evulekileyo yophando e-Afrika kunye nenkolelo eqinisekileyo yeyantlukwano nokubandakanywa. Umseki weSudan evulekileyo, inyathelo lokuzimela elivulekileyo lesizwe. Ukwikomiti elawulayo ye-SPARC Africa, ongumcebisi wayo Vula iiMephu zoLwazi nakwibhodi yabalawuli ye YOBONWELEKILEYO ka-11.
IZiko loPhando ngeMfuzo kunye neRgengeniso yezeMedicine (GRMCR) yeYunivesithi Putra Malaysia (UPM) kunye neMalaysia Genome Institute (MGI) [I-ORCiD]
Umfundi we-PhD we-Human Genetics esebenza kuphando olusisiseko kunye noguqulelo ekuphuhliseni ukunyangwa okujolise kumhlaza womnxeba wesintu esebenzisa ubuchwephesha bokulandelelana okukhulu.
I-African Digital Scholarship, Uhlobo loPhando, KwiYunivesithi yeStellenbosch, Mzantsi Afrika [I-ORCiD]
Ulawula isebe leeNkonzo zeThala leeNcwadi kumathala eencwadi e-UCT kwaye uhlala egcina umsebenzi wokuzimela otyebileyo, kubandakanya nokufundisa ithiyori kunye nentetho yobugcisa kunye nezifundo ezibaluleke kakhulu kumaziko emfundo ephakamileyo eNtshona Koloni, enika iindibano zocweyo kwividiyo, isandi kunye nokufota, ukubhala uhlolo, ebonisa ubugcisa bakhe bokufota, kwaye esenza njengegubu. UNiklas uphethe i-MA (FA) kunye ne-BA (iiHons) ezivela e-UCT, kunye ne-BA kwezemfundo evela kwiDyunivesithi yaseCologne.
Umphathi weProjekthi yeZonyango, Isibhedlele seYunivesithi yaseWürzburg
Unenzondelelo, isayensi yesayensi yobomi eneelwimi ezininzi eneminyaka eli-10 + yamava kwi-biology ye-molekyuli, ikhemesti kunye ne-neurosciences. Uphuhlise ubuchwephesha obomeleleyo kwi-prelinical and clinical neuroscience kumazwe aphesheya. Ukongeza emsebenzini wakhe wophando, uCarine uzibandakanya ekufumaneni inzululwazi kunye nokwakha amandla enzululwazi e-Afrika. Olu manyano lujolise ekuququzeleleni amathuba okufunda oqeqesho olwahlukeneyo, ukugqithiselwa kolwazi kunye nokusebenzisana kwamazwe aphesheya ukuze kuphuculwe umgangatho wokufundisa kunye nophando e-Afrika. ”
Iziko Loqeqesho Kwezonxibelelwano - I-TCC yase-Afrika, Khenya
Iindawo ezinomdla zikaKevin zibandakanya uphando kunye nophuhliso, izibonelelo zabasebenzi, isayensi yedatha kunye nesayensi evulekileyo. Ujonge ukudlula kwaye anikele ngezisombululo ezenza ixabiso kunye namava amnandi kwindawo yokusebenza enokubonakala ngathi iphindaphindeka kwaye iyasongamela.
I-EMEA Izicelo zoNxibelelwano, iJiphutha
Ingcali ekhokelayo yoTshintsho lweDijithali / iNzululwazi yeDatha, iinjineli zoPhando kunye noPhuhliso, iNqununu yeZisombululo zeNqununu kunye noMphathi weNkqubo ye-Agile.
UJustin Sègbédji Ahinon
Umseki we-AfricaArXiv, IGADE, Bhenin [I-ORCiD]
Umphuhlisi we-WordPress onemvelaphi yamanani afakiweyo kunye nomdla onamandla kwimicimbi yokufikelela e-Afrika nasekuhanjisweni kolwazi kunye nendlela ezenziwa ngayo kwilizwekazi.
IYunivesithi yaseMohamed V kunye neHassan II yeZiko lezoLimo kunye noNyango lwezilwanyana, eRabat, Morocco [I-ORCiD]
Umfundi we-PhD kwi-Neuroscience
UMahmoud M Ibrahim
Uniklinik RWTH Aachen, Germany kunye ne-Egypt
Iinkqubo zoPhando lwebhayoloji, kusetyenziswa ukufundwa komatshini ukwakha imodeli yokuqikelela yeenkqubo zebhayiloji yedatha enkulu evela kwidatha enkulu, ngakumbi ukulandelela idatha. Okwangoku kusebenza ekuqondeni isifo ukudibanisa imolekyulu kunye nedatha yeklinikhi. Ngaphambili ebesebenza kwiBiotechnology nakwimizi-mveliso yoPhando ngezeClinic.
Umlawuli kwi Ulutsha lweJabulani loTshintsho (JAY4T), eKenya
Isazi sebhayoloji kunye nesayensi yokunxibelelana ngomnqweno woLondolozo lwebhayoloji kunye nokwenza lula inkqubo yolondolozo lwasekhaya.
Umsunguli kunye ne-CTO ku IVilsquare.org, Nayijeriya
Umphathi weprojekthi kunye nomphandi kumacandelo anjengezempilo, ezemfundo, ezokwakha, ezomthetho, ezomsebenzi, ezemveliso, kunye nokhuseleko kunye nokujonga.
INkqubo kaZwelonke yokuThintela uMhlaza-eNigeria, iYunivesithi yaseIbadan - eNigeria [I-ORCiD]
U-Olabode ulutsha olunomdla lwaseNigeria olunomdla okhethekileyo ekuboneni iAfrika yephupha lethu. Ukholelwa ukuba "impilo bubutyebi". Ukuze uphile kakuhle, kufuneka uphile. Ubambe isidanga se-MSc kunye ne-BSc kwiBiochemistry (uPhando lweCancer kunye neMoology Biology).
Ujonge phambili kumathuba okuba ndisebenzise intsebenziswano, uphando, ubunkokheli nezakhono zobugcisa. ”
IYunivesithi yaseAlesandria, eYiputa
I-biochemist elandela isidanga se-MSc kwi-Neuroscience kunye ne-Biotechnology enemvelaphi yobuchwephesha kwi-biology ye-molekyuli kunye nenkcubeko yeseli ye-stem.
UGqirha Sara El-Gebali
Umseki we-OpenCider, eJamani [I-ORCiD]
USara ngumseki we-OpenCider kunye neNkokeli yeQela loLawulo lweDatha ePhambili eBerlin. Ngaphambili wayesebenza njengomgcini wesiseko sedatha kwi-European Molecular Biology Laboratories (EMBL) -EBI nakwi-EMBO ene-PhD kuphando lomhlaza kwiYunivesithi yaseBern, eSwitzerland. Ungummeli oqinileyo wolwakhiwo loluntu kunye nokukhuthazwa kwabasetyhini kunye namaqela angamelweyo kumabala e-STEM.
IYunivesithi yaseWest Virginia, eUSA [I-ORCiD]
Umfundi we-PhD oneminyaka eliqela yamava oshishino njengenzululwazi yedatha. Uphando lwakhe lugxile kuqoqosho lwendalo, uzinzo, uqoqosho lwendawo, kunye ithiyori yegrafu.
Umseki we-AfricaArXiv, Ukufikelela kwiimbono ezi-2', IGADE, Jemani neKenya [I-ORCiD]
Umqeqeshi kunye nomcebisi kuLawulo lweNzululwazi ngeNzululwazi noLawulo lweProjekthi yeSayensi Ngokujolisa kwizixhobo zedijithali zesayensi kunye nelebheli yakhe ', ujolise ekomelezeni uPhando kwilizwekazi laseAfrika ngeNzululwazi evulekileyo.
Mlawuli Jikelele, Imfundo yePivot Global Iqela lokubonisana
UMahmoud Bukar Maina
Umntu oSebenzayo emva KwiYunivesithi yaseSussex [I-ORCiD]
Mlawuli Jikelele, IZiko loQeqelelo loNxibelelwano (TCC-Afrika)
I-ORCID Engagementment lead [I-ORCiD]
IYunivesithi yaseWashington kunye noFikelelo oluVulekileyo eNigeria
KwiYunivesithi yaseOxford (E-UK), kwiYunivesithi yaseWitwatersrand (RSA) kunye IGADE [I-ORCiD]
Phantsi kweMicroscope UMsunguli